Hacksaw Ridge (2016) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
R 2016 139 min Biography, Drama, History
Won2Oscars. Another 46 wins & 111 nominations.
အော်စကာ ဆန်ကာတင် ၆ ဆု၊ အခြားဆန်ကာတင်ဆုပေါင်း ၆၉ ဆုမှာ ၃၅ ဆုအထိရရှိခဲ့တဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးစစ်ကားအသစ်တစ်ကားပါ။ Saving Private Ryan, We are soldiers ကားတွေကို အမှီလိုက်နိုင်တဲ့ ကားကောင်းတစ်ကားပါပဲ။ ပြီးတော့ ဖြစ်ရပ်မှန်ကို အခြေခံထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကရဲ့ အမြင့်ဆုံး သူရဘွဲ့တံဆိပ် Medal Of Honor ကို စစ်မြေပြင်မှာ ကျည်ဆံတစ်တောင့်မပစ်ဘဲ ရရှိခဲ့တဲ့ ဆေးတပ်သား တစ်ယောက်ရဲ့ အကြောင်းပါပဲ။ အရင်က အန်ဒရူးဂါဖီးကို မြင်ရင် SpiderMan လို့စိတ်ထဲမှာ တန်းပေါ်ပေမယ့် ဒီကားအပြီးမှာတော့ အန်ဒရုးကိုဘယ်မှတွေ့တွေ့ တပ်သားဒက်စ်မွန် ဒေါ့စ်အဖြစ်ပဲ မြင်နေတော့မယ်ထင်ပါတယ်ဗျာ။
ဘာသာရေးယုံကြည်မှုအရ သေနတ်လုံးဝမကိုင် လူမသတ်ဘဲ စစ်ပွဲထဲမှာ နိုင်ငံအတွက် တာဝန်ထမ်းမယ်ဆိုပြီး ခေါင်းမာမာနဲ့ ခုံရုံးအတင်ခံ ထောင်ကျမလိုအဖြစ်ခံပြီး လိုက်ခဲ့တဲ့ လူဗလံလေးတစ်ယောက်၊ စစ်ပွဲဆိုတာ လူသတ်ဖို့တင်မဟုတ်ဘူး လူကယ်ဖို့လည်း ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ ဆေးတပ်သားလေးကို အကုန်လုံးက ငကြောက်၊ အမိန့်မနာခံတဲ့ကောင် ငါတို့ကို ရှေ့တန်းမှာ ဒုက္ခပေးမယ့်ကောင်ဆိုပြီး ၀ိုင်းနှိမ်ခဲ့ကြပေမယ့် တကယ်တန်း တိုက်ပွဲတွေကြားထဲမှာ ဒက်စ်မွန်မပါရင် မတိုက်ချင်တော့လောက်အောင် အားကိုးခံလာရတဲ့ သူရဲကောင်းဖြစ်လာခဲ့ပုံလေးပါ။ တကယ်လည်း သမိုင်းမှာ သူတစ်ယောက်ထဲက ဟက်ဆောရစ်ဂ်ျ တိုက်ပွဲမှာ လူ ၇၅ ယောက်ကို ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာပါပဲ။
ပြီးတော့ ဒီဇတ်ကားထဲမှာမင်းသား Andrew Garfield၊မင်းသမီးTeresa Palmer၊ မင်းသား Sam Worthingtonအခြား နာမည်ကျော်ဇာတ်ပို့များပါလေတော့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းထွေထွေထူးထူးပြောစရာမလိုဘူးထင်ပါတယ် Screen playပိုင်းဆိုရင် အထူးသဖြင့်ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်းထိချက်ပြင်း 7.62မမကျည်ဆန်ရဲ့ အသားတွေပေါ်ဖောက်ထွက်ပုံတွေ အမြောက် ကျည်ဆန်တွေထိဖြာပုံတွေကဝေဖန်ရေးဆရာတွေရဲ့ချီးကျူးခံရလောက်အောင် လန်းလွန်းတယ်….ကဲ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ရေးတာလည်းများပြီဗျာ IMDBကလည်း 8.6ဆိုတော့ ကျွန်တော်ညွန်းတာ ဟုတ်မဟုတ်ကတော့ စောင့်သာကြည့်လိုက်ပါဦးလို့
Option 1 mfile.cloud 653 MB SD (480p)
Option2storage.msubmovie.com 653 MB SD (480p)
Option3drive.google.com 653 MB SD (480p)
Option4drive.google.com 653 MB SD (480p)
Option9mfile.cloud3GB FHD AC3 5.1
Option 10 storage.msubmovie.com3GB FHD AC3 5.1
Option 11 drive.google.com3GB FHD AC3 5.1
Option 12 drive.google.com3GB FHD AC3 5.1